4 filim oo kusaabsan masiibooyinka dabiiciga ah | Saadaasha Shabakadda
Sida ay yiraahdaan, xaqiiqda had iyo jeer dhaafa sheekooyinka. Adduunyada shineemo, waxaa jira aflaam badan oo kahadlay mowduuca masiibooyinka dabiiciga ah iyo ifafaalaha saadaasha hawada.
Waa nooc shaneemo ah oo dadweynaha guud ahaan ay jecelyihiin waxyaabo badan awgood sawirada cajiibka ah inkasta oo sidaan horay u sheegay, xaqiiqadu badanaa badanaa ugu cajaa’ib badan oo halaag leh.
Kani waa filim kaas oo duufaan xoog leh wuxuu ku dhow yahay inuu burburiyo dhammaan gobolka Oklahoma. Doorka cayrsashada duufaanka Waa lagama maarmaan filimka tan iyo markii ay mas'uul ka noqon doonaan ka fogaanshaha masiibadaas oo kale. Filimku si fiican ayuu dib u soo kabanayaa baabba 'iyo xoog oo ka mid ah duufaanno la sheegay, taasoo ka dhigeysa in daawaduhu dareemo shucuur badan.
Waa a filim apocalyptic taas oo sheegaysa sida duufaan layaableh u qabsato meeraha oo dhan ee da'da barafka cusub. In kasta oo uu filim yahay, inbadan ayaa rumaysan in mar uun ay sidan ku dambayn doonto saameynta xun ee isbedelka cimilada adduunka oo dhan
Filimkan wuxuu isku dayayaa inuu ku dhawaado xaqiiqda maadaama uu ku saleysan yahay Saadaasha jadwalka Mayan. Saadaashaas waxaa lagu sheegay in sanadka 2012 aduunka oo dhan dhibaato soo gaari doonto taxane masiibooyin dabiici ah taasi waxay sababi laheyd burburkeeda. In kasta oo saadaashani si farxad leh aan loo fulin, haddana warbixinnadii ugu dambeeyay ee cimilada ayaa muujinaya koror Dhacdooyinka saadaasha hawada kulaylka adduunka oo meerahu xilligan la kulmayo awgood.
Munaasabaddan, khayaali ayaa nagu qasbeysa inaan ka fikirno sida fulkaano qarxisay gudaha magaalada Los Angeles. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto cawaaqib xumada ka dhalan karta qarax la sheegay oo aad qiyaasi karto waxa dhici doona haddii ay dhacdo dhacdo dhab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 4 filim oo kusaabsan masiibooyinka dabiiciga ah
Waa maxay meesha ugu guusha badan adduunka?
Asalka kululaynta aduunka